Persimmon | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Persimmon: bara uru Njirimara na contraindications
Mgbụsị akwụkwọ na-emesapụ aka na-enye mkpụrụ ya bara uru. N'oge a, ọ bụ oge maka ezigbo vitamin - persimmon, nke na-enye aka iwusi usoro mgbochi ike n'ehihie. Na nhazi nke osisi, mkpụrụ osisi bụ beri, ma na nri, a na-akpọ ya mkpụrụ. Ka anyị gbalịa ịchọpụta ihe dị mkpa dị na mkpụrụ ahụ, uru ndị dị aṅaa na nsogbu na-eweta ya.
Persimmon na Crimea: kụrụ ma lekọta
Ọ bụrụ na ịchọrọ iri nri na-enweghị atụ, mgbe ahụ persimmon ga-adị na tebụl gị n'oge ọ bụla. Berry ga-elekọta anya, obi, akpa ume, eriri afọ, akụrụ, hemoglobin n'ime ọbara, ezigbo ọnọdụ na ịma mma. Naanị echela na nri dị otú ahụ ga-efu gị ezigbo ego.
Mmetụta nke persimmon na ahụ nwanyị dị nnọọ ukwuu: a na-eji mkpụrụ osisi eme ihe maka ihe oriri, nke e ji mee ihe maka ọgwụgwọ, nke e ji mee ihe na cosmetology na maka ọnwụ. Tụlee ihe nke ngwaahịa a, ihe ọ na-eme, karịsịa iji ya na ngwa. A na-akpọ nkọwa na àgwà nke Persimmon dị ka mkpụrụ osisi oroma na-acha ọcha site na subtropics.
Anyị na-eto eto na nkume site na nkume: iwu nke ịkụ ihe ma lekọta
Persimmon - mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ ma na-eto eto n'oge na-adaba. Iji mee onwe gị ka ị na-eji bred, ọ dịghị mkpa ịzụta ya na ụlọ ahịa ahụ. Kedu otu esi eto eto na ulo, anyi ga-achota n'isiokwu a. Nkọwa E nwere ihe karịrị otu puku ụdị osisi a nke ezinụlọ Ebony mara. Ihe ndị a bụ osisi osisi ma ọ bụ osisi na-acha akwụkwọ ndụ na osisi na mkpụrụ osisi oriri.